I-Aventurine yi-quartz yepinki, emhlophe, i-orange, eluhlaza okanye umbala we-cherry ne-inclusions ye-mica yee-shades ezahlukeneyo. Kucatshangelwa ukuba kudala uvuyo olungonwabileyo nolonwabileyo, lunokukunceda ukugcina ukucinga okucacileyo nokuthokoza komoya. I-Aventurin ikwabizwa ngokuba yitye lokuthanda into ekufuneka ikhusele le ntliziyo. Kwii-Urals, i-aventurine ibonakala ivela kumbala obomvu obomvu. Ilitye lombala oluhlaza lugqitywa eChina, eUnited States naseIndiya, kwaye kwintengo ayikho ngaphantsi kweempawu ezifanelekileyo zeJade.
Kwamazwe ahlukileyo eli litye libizwa ngokungafaniyo. E-Russia, umzekelo, yayibizwa ngokuba yi-zlatochkr. Ukongezelela, kwiindawo ezahlukeneyo, ilitye linamagama alandelayo: i-taganite, ukunyuka kwamaNdiya, i-spark, i-fuchsite, belorechit.
Igama leemaminerali livela kwi-Italian "aventura", oku kuthetha "ukuzonwabisa", ulonwabo. "
Imizekelo engcono kakhulu ye-aventurine ingatholakala eBrazil, e-Austria, eRussia (kwii-Urals), kunye nabameli abakhulu be-aventurine eluhlaza bangatholakala kwi-Indiya. Kwaye i-aventurine, egcina umbala wayo obala okwesibhakabhaka, imvelaphi yeenxa zonke zeArtrian Salzburg. Idizayini ye-aventurine ebomvu ephethe i-hematite yidolophu yaseSpain yaseCap de Gata. I-aventurine eluhlaza okwesibhakabhaka ifumaneka kwimeko kaJaipur.
I-Aventurine ikwahlulo lwezinto zokugcoba kunye namatye okugcoba. Iyaziwayo kakhulu kwi-Asia-mpuma ye-Asia. Kwilizwe lethu kwii-XVIII-XIX zeenkulungwane. Iimpawu ezintle zelitye zazisetyenziselwa ukufakwa kwiindawo zokutshiza, izindandatho, i-cufflink kunye namacici. Yaye kunye nezinto ezibonakala zingasebenzi kakuhle, zaza kuveliswa kweepenki, iziprintshi, iifoloki, izibane, iibisi, iinjuba kunye nezixhobo zokugcoba.
Izakhiwo zonyango. I-Aventurine yaziwa kwakhona ngezilwanyana zonyango. Abaninzi banxiba entanyeni okanye kwisikristhi ngendlela yobuhlalu. Kukholelwa ukuba uyakwazi ukujamelana ne-bronchitis, ukunyamezela, ukunciphisa uxinzelelo lwegazi nokuphulukisa ngokukhawuleza amanxeba.
Emazweni asempuma, kukholelwa ukuba eli litye lisenza i-heart chakra, inceda ekunciphiseni uxinzelelo nokuphucula umbono. Kwakhona, i-aventurine inefuthe elihle xa isetyenziswe njengebhola lokusila.
Izakhiwo zobugqi. Abantu basendulo babekholelwa ukuba eli litye lixhomekeke ngqo kumlingo weNyanga kunye nomphumo walo wokutshintsha abantu baqikelele oku kulungelelaniswa, kuba iNyanga ingathinta umntu ngeendlela ezahlukeneyo. Oku kuxhomekeke, okokuqala, kwisigaba apho iplanethi ihlala ngexesha elithile (elipheleleyo, elimnyama, elinciphileyo, elikhulayo), okwesibini, ukusuka kumlingiswa kunye nohlobo lomntu, kubandakanywa iziganeko zakhe zobuntu (uphawu lwe-zodiac, ixesha lokuzalwa, isikhundla seeplanethi ngexesha leempembelelo kwenyanga nezinye izinto). Ngenxa yoko, kukho imbono ephikisanayo malunga nomphumo welitye kumnini wayo. Abanye bathi i-aventurine inceda abanokugembula, kodwa ukuyisebenzisa kakubi, ukwenzela ukuphepha ukulahlekelwa kwezinto eziphathekayo, akufanelekanga. Kwaye abanye babiza umnqweno "umlamli othandweni olumsulwa" kwaye bathambekele ekukholweni ukuba iipropati ze-aventurine zikhangela intliziyo yothando kumnini wabo. Kodwa bobabini bavumelana ngento enye - eli litye linceda ukunyusa imizwa emihle, ityala umntu ngokuzithemba, ithemba, ukuphucula imizwa kunye nokunika ingqondo ecacileyo.
Kodwa ungacingi ukuba ngokugqoka naluphi na ubucwebe nge-aventurine, uya kuphinda uvuyiswe kwaye unenhlanhla. Ingakwazi ukugqithwa ngabantu abangathwali nentsapho, musa ukuhlala kwizithuba ezinkulu, oko kukuthi, abantu abangenayo imithwalo enzima yemfanelo, umzekelo, abantwana. Kodwa nakwabo abo oku kuguguleka kulo mmbiwa, akufanele kwenziwe njalo. Ixesha elifanelekileyo lokugqoka i-aventurine yindlela yokunciphisa inyanga.
Ukongeza, i-aventurine ivumelekile ukuba igqitywe ngabantu abazalwa phantsi kwemiqondiso yamanzi kunye nomhlaba, oko kukuthi, phantsi kweempawu ze-Scorpio, iCarcer, i-Pisces, iTaurus, iCapricorn ne-Virgo. Kodwa ke aba bantu abakwazi ukugqoka ngaphezulu kwesigaba esinye senyanga. Kwaye nabameli beMark Marks - i-Aquarius, iLibra kunye ne-Gemini-batyunyiwe ukuba basebenzise i-adventurism njengento ekhuselekileyo kwaye bayigqoke kuphela xa kunokunceda ngokwenene, umzekelo, ngethuba lokuqala nganiso yothando. Kwaye ukusetyenziswa rhoqo kwesi sixhobo kungenza abantu abazalwa phantsi kwezi zibonakaliso, abangenasiphako, abahlaziyileyo nabangenakunqwenela.
Amaqela abameli be-Aventurine of Fire Signs-Leo, Aries, Sagittarius. Nokuba uzama kwi-ornament nayo, ziyakwazi ukuzenzekela ngengozi.
I-Aventurin, ngaphezu koko, ingaba ngumncedisi oyimfuneko kwimicimbi yothando. Le gama nayo ingabizwa ngokuthi "museum", kuba ibangele iimpembelelo zokudala kunye nokuphefumlelwa kwabaculi, ababhali kunye neemvumi.
Imveliso inobungakanani obuncinci kuba indawo eninzi yokuhlobisa imigodi ayinkulu kakhulu, ngokuqhelekileyo iyimivimbo, ububanzi bayo buba malunga ne-15 cm. I-Hermitage ibonisa i-vase ekhethekileyo eyenziwe nge-aventurine ekhanyayo, ububanzi be-246 cm kunye ukuphakama kwe-146 cm. KwiMigodi ye-Geological Museum yaseLondon yabonisa i-vase enkulu, eyenziwe kwi-Urals aventurine. UNicholas I, ummeli waseRashiya, wanikela kwisazi se-Scottish geologist uSir Murchison (ngo-1792 ukuya ku-1871), owathi wabuyela kumyuziyam.
Abavumbuli beenkwenkwezi bathi i-aventurine ilitye lokuvuya, ilanga kunye "nothando olumsulwa." Njengoko kwakucingwa ngaphambili, eli litye liyakwazi ukutsala intanda yakho. I-Aventurine iqinisa isimo sengqondo somntu, igalelo lokuzithemba nokuzithemba.
I-Metabolism - umlinganiselo wemethamo
Iingxaki zasebusika okanye izifo zonyaka
Indlela yokuphilisa i-trichomoniasis kubasetyhini?
I-Hepatitis C iyingozi yesifo senhlalakahle
Ama-nitrate kunye nemiphumo yazo kumzimba womntu
Intsiza yeGrass utshani, iimpawu zonyango
Ukuxilisa abantwana kumntwana unyaka o-1
I-Curd cream for cake
Kutheni amadoda ethanda ukulala ngesondo?
Imigaqo jikelele yokubala izinwele
Indlela yokufunda ukucwangcisa ixesha lakho
Ukungazinzanga kunye nokwesaba ngexesha lokukhulelwa
Ukunyamekela emva kwehlobo lehlobo